बहिरोपनको समाधान के हो ? – || koselinews.com ||
बहिरोपनको समाधान के हो ?
June 12, 2017 Loksari kunwar health, main_news, News 0
डा. रविन्द्रभक्त प्रधानाङ्ग
विभिन्न कारणले कान कम सुन्ने हुन सक्छ। जसको उपचारबाट सुन्ने शक्ति पुनः प्राप्त गराउन सकिन्छ। तर, कानको भित्री भागमा समस्या भई पूरै नसुन्ने भएमा साधारण उपचार वा मेसिन हियरिङ एड को प्रयोगबाट सुन्ने समस्या समाधान हुँदैन।
सुन्नै नसक्ने व्यक्तिलाई सुन्न सक्ने बनाउन नयाँ–नयाँ प्रविधि आविस्कार भएका छन्। विभिन्न आधुनिक प्रविधिमध्ये सुन्न नसक्ने व्यक्तिलाई सुन्न सक्ने बनाउने संसारमा अत्याधिक प्रयोगमा आएको यन्त्र हो, कक्लियर इम्प्लान्ट।
कक्लियर इम्प्लान्टु मानव कानले जस्तै सुनाइको काम गर्ने एक आधुनिक यन्त्र हो। यसको दुईवटा भाग हुन्छन्। एउटा भाग शल्यक्रिया गरेर कानको पछाडि छालाभित्र हड्डीमा जडान गरी तार युक्त इलेक्ट्रोडुहरुलाई कानको भित्री भाग कक्लियाुमा राखिन्छ। अर्को भागलाई स्पिच प्रोसेसरु भनिन्छ। जुन छालाबहिर रहन्छ र चुम्बकद्वारा भित्री भागसँग जोडिन्छ।
बाहिर जडान गरिएको भागमा माइक्रोफोन हुन्छ। जसबाट वातावरणको आवाज स्पिच प्रोसेसरुसम्म पुग्छ। स्पिच प्रोसेसरले विभिन्न ध्वनि शक्तिलाई विभाजित गरी भित्र जडान गरिएको इम्प्लान्टुमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी सिग्नलुबाट पठाइन्छ। यसरी आएका ध्वनि शक्तिु भित्र जडान गरिएको इम्प्लान्टबाट विद्युतीय शक्तिमा परिणत हुन्छ।
जुन कक्लियामा राखिएको इलेक्ट्रोडहरुसम्म पुग्छ। त्यहाँबाट यी विद्युतीय सूचना नशा कक्लियर नर्भ मार्फत दिमागसम्म पुग्छ र आवाज सुनिन्छ। आवाजको पहिचान दिमागले गर्छ। यसरी कक्लियर इम्प्लान्टुले कानको खराब भइसकेको भित्री भाग कक्लियालाई बाइपास गरी आवाजलाई दिमागसम्म पुर्‍याउँछ।
कसका लागि लाभदायक ?
जात कान नसुन्ने व्यक्तिमा बोलीको विकास हुँदैन र सदा बहिरो तथा लाटो भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो विचार आदान–प्रदान गर्न सांकेतिक भाषाको प्रयोग र दोभाषेको भर पर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यो समस्याको पहिचान बेलैमा भयो भने कक्लियर इम्प्लान्ट शल्यक्रिया गरेर सुन्न सक्ने बनाउन सकिन्छ र बोलीको विकासको तालिम दिएर भाषाको विकास गर्न सकिन्छ। कक्लियर इम्प्लान्ट शल्यक्रिया तीन वर्षको उमेरभन्दा अगाडि गरिएमा बोली विकास राम्रो हुन्छ। ६\_७ वर्षको उमेरसम्ममा दिमागको नयाँ विकास गर्ने क्षमता ९न्यूरल प्ल्यास्टिसिटी० गुमाइसकेको हुनाले ६\_७ वर्षको उमेरपछि यो शल्यक्रियाबाट सुन्नमा मद्दत गरे पनि बोलीको विकास राम्रो हुन सक्दैन।
२० सामान्य सुनाइ भएर बोलीको पूर्ण विकास भएपछि बहिरो भएको खण्डमा कक्लियर इम्प्लान्टबाट सुन्ने क्षमता फर्काउन सकिन्छ। चोटपटक, ट्युमर, भित्री कानको रोग वा उमेरको कारणबाट सुनाइ शक्ति कम भएर हियरिङ एडको प्रयोगबाट सुनाइमा उपलब्धि हुन सकेन भने कक्लियर इम्प्लान्ट नै यसको सही समाधान हो। मेनिनजाइटिस भएर कान नसुन्ने भएमा सकेसम्म चाँडो कक्लियर इम्प्लान्ट शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। ढिलो भएमा शल्यक्रिया जटिल हुनसक्छ र कक्लियर इम्प्लान्टको प्रयोगबाट हुने फाइदामा कमि आउन सक्छ। कक्लियर इम्प्लान्टबाट सुनिने इलेक्ट्रोनिक आवाज अलि फरक किसिमको हुने भएकाले शल्यक्रियापछि केही हप्ता तालिमको आवश्यकता पर्छ।
कसलाई फाइदा गर्दैन ?
कानको भित्री भाग कक्लिया नबनेको अवस्थामा तारयुक्त इलेक्ट्रोडहरु राख्ने ठाउँ हुँदैन र कक्लियर इम्प्लान्ट शल्यक्रिया सम्भव हुँदैन। कानको भित्री भाग कक्लियामा राखिएको इलेक्ट्रोडहरुसम्म पुगेको विद्युतीय सूचनालाई दिमागसम्म पुर्‍याउने नशा कक्लियर नर्भ नभएको वा काम नगरिएको अवस्थामा पनि कक्लियर इम्प्लान्टबाट फाइदा हुँदैन। स्वास्थ्य खबरबाट साभर